07/29/13 ~ Myanmar Forward
အများကြီး မတွေးတော့ အရာရာကို ဥပေက္ခာ ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မိုးဟေကို
Posted by drmyochit Monday, July 29, 2013, under အနုပညာ | No comments
အများကြီး မတွေးတော့ အရာရာကို ဥပေက္ခာာ ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မိုးဟေကိုမိုးရဲ့ ထွက်သမျှ ဇာတ်ကားတွေ ကို ပရိသတ် တွေက အားပေးနေကြ တာကို တာဝန်ကြီး လာတယ်လို့ ခံ စားရလား ဆိုတော့ အဓိကက ဘာ အလုပ်ပဲ လုပ်လုပ် မိုးပေါ့ပေါ့တန် တန်မလုပ် တတ်ဘူး။ ဟိုအရင်က တည်းက မိုးမှာရှိတဲ့ ကိုယ်စွမ်း ဥာဏ် စွမ်းလေးနဲ့ပဲ ပရိသတ်ချစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် တာဝန်ကြီးတယ်၊ တာဝန်သေးတယ် ဆိုတာကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပြီး ပရိသတ်အပေါ်လေးစားတဲ့ စိတ်ပဲ ရှိတယ်။ အခုရော နောင်ရော ပရိ သတ်တွေအပေါ် လေးစားသွားမှာ ပါ။
မိုးရဲ့ သရုပ်ဆောင် မှုတွေကို ကိုယ်တိုင် ပြန်သုံးသပ်ပြီး ကြည့်ရင် လိုအပ်ချက်လေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို လိုအပ်ချက်တွေကို နားလည်ပြီး ကြည့်ပေးတဲ့ ပရိသတ် တွေက မိုးအတွက် အရမ်းတန်ဖိုးရှိ ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ တိုက်ခိုက် မှုတွေ၊ အခက်အခဲတွေရှိတတ်ပေ မယ့် အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျ လွယ်တဲ့ အထဲမှာ မိုးမပါဘူး။ တစ်ခုခုဖြစ် လာခဲ့ရင်လည်း အကောင်းဘက်က နေလှည့်တွေးတတ်တယ်။ ဘယ်အ ရာမဆိုဖြစ် ချိန်တန်လို့ ဖြစ်တာ၊ ပြီး ရင်တော့ ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့ အရာ တွေလာမှာဆိုပြီး ခံစားတတ်တယ်။ အဲဒီအခါ စိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်း လျော့သွားတယ်။ အခက်အခဲက တော့ ရှိတာပဲ။ ဘာအလုပ်ပဲလုပ် လုပ်ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က အများ ကြီးမတွေးတော့ အရာရာကို ဥပေက္ခာပြုနိုင်လာတယ်။ မိုးက တော့ ဒီနေ့ ဘာလုပ်ရမလဲ၊ နောက် နေ့ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုပြီး အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေပဲ ခေါင်းထဲရှိ တယ်။ မိုးကအောင်မြင် တယ်ဆို တာထက် မိုးလုပ်ချင်တာလေးတွေ လုပ်ခွင့်ရနေတဲ့အပေါ် ကျေနပ်ပါ တယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ပရိသတ် တွေအတွက် မိုးအမြဲကြိုးစားသွား မှာပါ။
ရည်းစားဟောင်းက မျက်လုံးထိုးဖောက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူသည် ရည်းစားသစ်က တိုက်ခိုက်ခြင်းလည်း ခံရပြန်
Posted by drmyochit Monday, July 29, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ် ကလေးနှစ်ယောက် အမေဖြစ်သူဟာ အကြမ်းဖက်တတ်သော သူမ၏ ရည်းစားဟောင်းက သူမ၏ ညာဘက်မျက်လုံးကို ထိုးဖောက်ခဲ့သောကြောင့် မျက်လုံးတစ်ဖက် ရာသက်ပန် ကန်းသွားခဲ့ပြီး နှစ်နှစ်အကြာ၌ သူမ၏နေအိမ်တွင် သူမ၏ လက်ရှိရည်းစားက သူမအား ဓါးဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့်အတွက် ယခင်က အတွေ့အကြံကို ပြန်ပြောင်း သတိရခဲ့ကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလတုန်းက (၁၂)နာရီကြာ ဒုက္ခခံခဲ့ရသော သူမ၏ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ် ယင်းဖြစ်ရပ်ကြောင့် သူမမျက်လုံးတစ်ဖက် အမြင်အာရုံ ရာသက်ပန် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ထိုစဉ်က သူမ၏ကလေးတွေကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မမြင်စေရဘူးဟု သူမ၏ရည်းစားဟောင်းက ပြောဆိုကာ သူမအား မေ့လဲသွားသည်အထိ ရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းပြစ်မှုကြောင့် (၃၄)နှစ်အရွယ်ရှိ သူမ၏ ရည်းစားဟောင်းက တသက်တကျွန်း ထောင်ကျကာ လုံခြုံရေးအပြည့်ချထားသော စိတ်ရောဂါသည်များထားရာ အဆောင်၌ နေထိုင်နေရပြီး ၎င်းအား လွှတ်မည်ဟု စဉ်းစားသည့်တိုင် အလုပ်ကြမ်း(၆)နှစ် လုပ်ကိုင်စေရန် တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်၏ နှစ်နှစ်အကြာ ယခုလိုအချိန်တွင် အသက်(၃၂)နှစ်အရွယ် သူမ၏ လက်ရှိရည်းစားက သူမ၏နေအိမ်တွင် သူမအား ဓါးဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သောကြောင့် ယခင် ခြောက်ခြားစရာ သူမ၏ဖြစ်ရပ်ကို သူမပြန်ပြောင်း သတိရခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိရည်းစားကတော့ တရားရုံးတွင် အယူခံဝင်ခဲ့သောကြောင့် ထောင်ဒဏ် ရက်သတ္တပတ် (၁၄)ပတ်သာ ကျခံစေရန် တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် ၎င်းအား သူမ၏အိမ်အနီးအနား သွားလာခြင်းမှ တားမြစ်ထားခြင်းလည်း ခံထားရသည်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်အား ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း လိင်ကျွန်အဖြစ်စေခိုင်းခံခဲ့ ရသည့် အမျိုးသမီးများက ဆန္ဒပြ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသည့် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးအား သမ္မတဘနီနိုအာ ကွီနိုမှ မာလက်ကာနန်နန်းတော်တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံနေသည့် အချိန်တွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း လိင် ကျွန်အဖြစ် စေခိုင်းခံခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီးတစ်စုက နန်း တော်အပြင်ဘက်တွင် ဆန်္ဒပြခဲ့ကြောင်း ဇူလိုင် ၂၈ ရက်က ဆင်ဟွာသတင်းဌာနမှ ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါအမျိုးသမီးများမှာ လိင်ကျွန်အဖြစ် စေခိုင်းခံခဲ့ရသည့် လိုင်လာဖိလစ်ပီနာအဖွဲ့မှ အသက်ရှင်ကျန် ရစ်သူများဖြစ်ကြပြီး ယခုအချိန်တွင် အသက် ၈၀ ကျော်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၂၀၀ ခန့်ရှိခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့အနက် ၇၃ ဦးမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည့် အမျိုးသမီးများမှ “လိင်ကျွန်အဖြစ် စေခိုင်းခံခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီးများအတွက် တရားမျှ တမှုရှိရေး၊ “တခြားသော အမျိုးသမီးမျိုးဆက်များအတွက် လိင်ကျွန်အဖြစ် ခိုင်းစေမှုထပ်မံမဖြစ်ပေါ်ရေး၊ ကျွန်မတို့က တရားမျှတမှုကို လိုချင်တာပါ။ သင်္ဘောတွေမဟုတ်ပါဘူး” ဟူသော စာတန်းများအား ကိုင် ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် သမ္မတအာကွီနိုအနေဖြင့် ဂျပန်အစိုးရမှ တောင်းပန်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ၀န်ကြီးချုပ်အာဘေးနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် တောင်းဆိုသင့်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
“ဂျပန်နိုင်ငံက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးတွေကို ပြည့်တန်ဆာအလုပ်လုပ်ဖို့ အတင်းအ ဓမ္မစေခိုင်းခဲ့တာကို အခုထက်ထိ တောင်းပန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ၀န်ကြီးချုပ်အာဘေးက ဒီလုပ်ရပ်အတွက် တောင်းပန်တဲ့ ကိုနိုကြေညာစာတန်းကို ဆက်မသုံးဖို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံတကာက ဖိအားပေးခဲ့တဲ့ အတွက် ပြန်သုံးခဲ့ရပါတယ်” ဟု လိုင်လာဖီလစ်ပီနာ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Rechilda Extremadura ကဆိုသည်။
မက်လောက်စရာ၊ မျက်လှည့်စတဲ့ စီးရီးတွေနဲ့ ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဝိုင်းစုခိုင် သိန်းက သူ့ရဲ့တတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော်စီးရီး အာဘွားကို အောက်တိုဘာလမှာ ဖြန့်ချိပေးတော့ မှာပါလို့ The Voice ကိုပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီစီးရီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ဒီစီးရီးထဲက သီချင်းစာသားတွေ၊ ပုံစံတွေကို ရှေ့မှာထွက်ခဲ့တဲ့ ခွေတွေနဲ့ မတူအောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားထားပါတယ်။ တေးရေးတွေကတော့ ရွှေဂျော်ဂျော်၊ မိုးမိုး၊ ဇဝါ၊ စံပီး၊ ညီမင်းခိုင်၊ ဆောင်းဦးလှိုင်၊ ဖိုးကာတို့ရေးတဲ့ သီချင်းတွေပါမယ်။ စီးရီးခေါင်းစဉ်ကို အာဘွားလို့ ပေးဖြစ် တာကတော့ ဝိုင်းစုက ရှိုးပွဲတစ်ခုဆိုပြီးတိုင်း ပရိသတ်တွေကို အာဘွားလို့ နှုတ်ဆက်လေ့ရှိတယ်။ အဲ့ဒီ အကြောင်းလေး ကို အခြေတည်ပြီး ရေးထားတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက အဖေ၊ အမေတွေက အာဘွားပေးတယ်။ ကြီးလာတော့ ချစ်သူက အသည်းယားလို့ အာဘွားပေးတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးလေး ရေးထား တာပါ။ သီချင်းတွေက အားလုံးပြီးနေပါပြီ။ အောက်တိုဘာလလောက်မှာတော့ ထွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေ ပါတယ်” လို့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းက ပြောပါတယ်။
လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အနေနဲ့ကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးနေသလို တေးသံရှင် ဆောင်းဦး လှိုင်နဲ့ စုံတွဲတေးစီးရီးတစ်ခွေ၊ တေးသံရှင် R ဇာနည်၊ ဟန်ထွန်း၊ ဆိုတေး၊ ဘန်နီဖြိုး၊ လွှမ်းပိုင်၊ ဟဲလေး၊ Snare၊ မိုးမိုး၊ နေတိုး၊ စည်သူလွင်တို့နဲ့ စုံတွဲတေးစီးရီးတစ်ခွေ စီစဉ်နေပြီး အမေရိက ဖျော်ဖြေရေးခရီးတစ်ခုလည်း သွားဖို့ရှိတယ်လို့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းက ဆိုပါတယ်။
ညစ်ညမ်း ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ပရိုဂျက်တာနှင့် ပြသသည့် သတင်း မဟုတ်မှန်ဟု သန်လျင် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူများ ရှင်းလင်း
Posted by drmyochit Monday, July 29, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သန်လျင်မြို့နယ်ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ် တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကျောင်းသား/သူ နှစ်ဦး မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ ဆရာမကြီးနှင့်တကွ တာဝန်ရှိသူ များက နှစ်ဖက် မိဘများကို အဆိုပါ တက္ကသိုလ်သို့ ခေါ်ယူ၍ ၎င်းတို့ သားသမီးများ၏ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ပရိုဂျက်တာနှင့် ပြသခဲ့သည် ဆိုသည့် ကောလာဟလမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက် နံနက်က ယင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရှေ့ရှိ အကိုကြီး စားသောက်ဆိုင်တွင် ကျင်းပသည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ကိုယ်စား အမှန်တရား ပေါ်ပေါက်ရန် ရှင်းလင်းခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျောင်းသား ခြောက် ဦးခန့်က မီဒီယာများထံ ရှင်းပြသည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲအရ သိရသည်။
လက်ရှိထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် မျိုးစောင့်ဥပဒေပါ အချက်များအပေါ် အမြင်အမျိုးမျိုးဖြင့် သုံးသပ်မှုများ ရှိနေပြီး မျိုးစောင့် ဥပဒေကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများအား ကာကွယ်သည့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်
ဇွန် ၂၇ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး အတွက် သြ၀ါဒခံယူပွဲ ကျင်းပစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် မျိုးစောင့်ဥပဒေကြမ်းပါ အချက်များအပေါ် အမြင်အမျိုးမျိုးဖြင့် သုံးသပ်မှုများ ရှိနေသော်လည်း မျိုးစောင့်ဥပဒေကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများအား ကာကွယ်သည့် ဥပဒေမှာ အခိုင်အမာ ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေ ပညာရှင်များထံမှ သိရသည်။
မြန်မာအမျိုးသမီးများ အမွေဆက်ခံခြင်း၊ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ပါက ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှု အက်ဥပဒေအရ ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်း၊ မဟာမေဒင် ဖြစ်ပါက မဟာမေဒင် တရားဥပဒေအရ ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်း၊ ဟိန္ဒူဖြစ်ပါက ဟိန္ဒူဥပဒေအရ ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်း၊ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပါက ခရစ်ယာန်တရား ဥပဒေအရ ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဇွန် ၂၇ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး အတွက် သြ၀ါဒခံယူပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ယင်းအခမ်းအနားတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများ၏ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကို ကန့်သတ်ထားသည့် အချက်များ ပါဝင်သော မျိုးစောင့် ဥပဒေကြမ်းကို သံဃာတော်ကြီးများ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များက အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြကာ ယင်းဥပဒေကြမ်းအား လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အများသိထားသည့် မျိုးစောင့်ဥပဒေခေါ် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း ဆိုင်ရာ အရေးပေါ် ဥပဒေ(မူ ကြမ်း)ပါ အချက်အချို့မှာ မည်သူမဆို မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးကို လက်ထပ်မည့်သူသည် တရားဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘာသာခြား ဖြစ်ခဲ့သူက မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီးကို လက်ထပ်ပေါင်းသင်းမည် ဆိုပါက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်လက်မှတ် ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပါရှိသည်။
ထို့အပြင် လက်ထပ်မည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးမိဘ (သို့မဟုတ်) အုပ်ထိန်းသူတို့၏ စာဖြင့် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ခံရယူမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာ(သို့မဟုတ်) ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး လက်ထပ်ရမည် စသည်ဖြင့် ပါရှိကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ အထက်ပါဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း မလိုက်နာဘဲ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးကို လက်ထပ်ခြင်း၊ ပေါင်းသင်းခြင်း ပြုလုပ်ပါက ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ကျခံစေရန် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ရမည့်အပြင် ထိုသူပိုင် ပစ္စည်းအားလုံးကိုလည်း သိမ်းယူ၍ ထိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးအား ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းအပြင် ထိုသို့ကျူးလွန်သူအပေါ် ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေ၏ ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၄၉၃ အပြင် သက်ဆိုင်ရာ ပုဒ်မတို့နှင့်သာ သီးခြားအရေးယူ အပြစ်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေ(မူကြမ်း)တွင် ပါရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
မဟာမေဒင် တရားဥပဒေအရ မဟာမေဒင် ဘာသာဝင် ယောက်ျားက ဘာသာဝင် မဟုတ်သူနှင့် လက်ထပ်သည်ကို တားမြစ်ထားကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမတစ်ယောက်မှ မဟာမေဒင် ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းပြီး လက်ထပ်မှ တရားဝင်ကြောင်း စီရင်ထုံးများရှိကြောင်း သိရသည်။ ဟိန္ဒူဘာသာတွင် ဇာတ်လေးမျိုးရှိပြီး ဇာတ်လေးမျိုးဝင် ဟိန္ဒူသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် လက်ထပ်ရန် မဖြစ်နိုင်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသော စီရင်ထုံးအချို့ ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
၁၈၇၂ ခုနှစ် ခရစ်ယာန် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း အက်ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၄ နှင့် ၅ အရ ဘာသာမပြောင်းဘဲ လက်ထပ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
''မျိုးစောင့်ဥပဒေနဲ့ ၁၉၅၄ ခုနှစ် ဥပဒေနဲ့တော့ အနှစ်သာရအားဖြင့် ကွာခြားမှု ရှိပါတယ်။ ဒီဥပဒေက အမျိုးသမီးတွေကိုပဲ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တဲ့ ဥပဒေလေ။ အခု မျိုးစောင့်ဥပဒေက အမျိုးသားရေး တစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ ဥပဒေဖြစ်လို့ အများပြည်သူတွေရဲ့ သဘောတူညီမှုနဲ့ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဆရာတော် သံဃာတော်တွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ ကိုယ့်ခြံစည်းရိုးကို ကိုယ်ခတ်တဲ့ သဘောဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်သူကိုမှတော့ မထိခိုက်အောင်တော့ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ဥပဒေ ဆိုတာကလည်း သာတူညီမျမှု ရှိသင့်ပါတယ်။ ဥပဒေပြုအဖွဲ့ အနေနဲ့လည်း တစ်ဖက်က လက်ရှိ တိုင်းပြည်အနေအထား၊ တစ်ဖက်က လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ အစွန်းနှစ်ပါးကို ကျယ်ပြန့်စွာ ချိန်ဆသင့်ပါတယ်'' ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးခွန်ဝင်းလှိုင်က သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
၁၉၅၄ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှု အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်မှာ ''လူပျိုဖော်ဝင်ပြီးဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သော ယောက်ျားတစ်ဦးနှင့် အသက် ၁၄ နှစ်အောက် မငယ်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမ တစ်ဦးတို့သည် ဤအက်ဥပဒေအရ ထိမ်းမြားနိုင်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် (က) နှစ်ဦးလုံးမှာ စိတ်ပေါ့သွပ်သူများ မဖြစ်စေရကြောင်း၊ (ခ)အသက် ၂၀ မပြည့်သေးသည့် မိန်းမဖြစ်လျှင် မိဘ၏ သဘောတူညီချက်ကို သော်လည်းကောင်း၊ မိဘတို့ သေဆုံးပါမှ အမှန်အုပ်ထိန်းသူ (သို့မဟုတ်) တရားဥပဒေအရ အုပ်ထိန်းသူရှိလျှင် ထိုအုပ်ထိန်းသူ၏ သဘောတူညီချက်ကို သော်လည်းကောင်း ရရှိပြီး ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ (ဂ) မိန်းမမှာ မပြတ်စဲသော တရားဝင် လင်ယောက်ျား မရှိစေရကြောင်း'' ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
မျိုးစောင့်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် အချို့သည် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရှိ တည်ဆဲဥပဒေအချို့ အပါအ၀င် ၁၉၅၄ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှု အက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် အချို့နှင့် သဘောသဘာဝ တူညီနေ . . .
''၁၉၅၄ အက်ဥပဒေက မြန်မာအမျိုးသမီး တွေအတွက် ပြည့်စုံတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိပြီးဖြစ်လို့ ပြည့်စုံပြီးသားပါ။ အဲဒီဥပဒေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး အခြားဘာသာဝင်နဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြား တဲ့အခါ တရားရုံးမှာ အသိပေးပြီး မိဘဖြစ်တဲ့သူက တားဆီးဖို့ပါတယ်။ ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူက ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရင်လည်း ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူရဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ရရှိဖို့လည်းပါတယ်။ သားသမီးတွေ အတွက်လည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ခံစားခွင့်တွေ ရှိပြီးသားပါ။ အမျိုးစောင့် ဥပဒေမူကြမ်း ဆိုတာကို လေ့လာထားမှု မရှိသေးလို့ ပြဋ္ဌာန်းသင့်၊ မသင့်ဆိုတာထက် ပါလီမန် ခေတ်ကနေစပြီး ပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးလာတဲ့ ၁၉၅၄ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှု အက်ဥပဒေမှာ ပါတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ အကြောင်းအရာတွေက ပြည့်စုံနေပြီလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ယခင်ကဆို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးက အခြားဘာသာဝင်နဲ့ လက်ထပ်တယ်။ အဲဒီယောက်ျားက သေသွားတော့မှ သူတို့ဘာသာရဲ့ ဥပဒေအရ တရားမ၀င်ဘူး ဖြစ်နေတာတို့၊ မွေးထားတဲ့ သားသမီးတွေကလည်း တရားမ၀င် ဖြစ်နေတာတို့ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် ၁၉၅၄ အက်ဥပဒေဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်'' ဟု ခရိုင်တရားသူကြီးဟောင်း ဦးအေးကျော်က ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် ၁၉၅၄ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှု အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ-၂၇ တွင် ''ဤအက်ဥပဒေအရ ထိမ်းမြားလျှင် (သို့မဟုတ်) ထိမ်းမြားသည်ဟု မှတ်ယူခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူနှစ်ဦးမှ ဖွားမြင်သော သားသမီးများသည် တရားဝင် သားသမီးများ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ ပုဒ်မ-၄ အရ အခြားအာဏာတည်ဆဲ ဥပဒေများတွင် မည်သို့ပင် ဆန့်ကျင်လျက် ပါရှိစေကာမူ ဤအက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမနှင့် ထိုမိန်းမ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သော လင်ယောက်ျားတိုင်း အပေါ်၌ အာဏာ သက်ရောက်ရမည်ဟု ပါရှိသည်။
လက်ရှိမျိုးစောင့် ဥပဒေကို ရေးဆွဲလျက်ရှိပြီး ယင်းဥပဒေအပေါ်တွင် အမြင်အမျိုးမျိုးဖြင့် သုံးသပ်မှုများလည်း ရှိနေရာ မျိုးစောင့်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် အချို့သည် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တည်ဆဲဥပဒေ အချို့ အပါအ၀င် ၁၉၅၄ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှု အက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် အချို့နှင့် သဘောသဘာဝ တူညီနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ရှေ့နေဦးခင်ဇော် (မရမ်းကုန်း)က ''၁၉၅၄ ခုနှစ် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း ဥပဒေနဲ့ အခုအမျိုးစောင့် ဥပဒေက ရည်ရွယ်ချက်ချင်း မတူပါဘူး။ ၁၉၅၄ ဥပဒေက မြန်မာ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတွေ လက်ထပ်ထိမ်းမြားရင် အခွင့်အရေးတွေ မဆုံးရှုံးရအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ မျိုးစောင့် ဥပဒေကတော့ လူမျိုးမပျောက်အောင် ကာကွယ်ပေးမယ့် ဥပဒေဖြစ်လို့ လက်ခံကြိုဆို ပေးရပါမယ်။ ဥပဒေတစ်ခု ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ အခါမှာ လူအနည်းစုကို ထိခိုက်ကောင်း ထိခိုက်နိုင်ပေမယ့် လူအများစုအတွက် ကောင်းကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် လက်ခံကြိုဆို သင့်ပါတယ်။ မျိုးစောင့်ဥပဒေက လူအများစုအတွက် ကောင်းကျိုးများရင် လက်ခံနိုင်ရမယ်'' ဟု သုံးသပ်ပါသည်။
မျိုးစောင့်ဥပဒေ ထုတ်ပြန်လိုလျှင် လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ၁၉၅၄ ဥပဒေတွင် ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်လိုလျှင် သော်လည်းကောင်း ထည့်သွင်းသင့်သည့် အချက်များကို ဥပဒေပညာရှင်များက အကြံပြုခဲ့ရာ မိမိလက်ထပ်လိုသူ၏ ဘာသာနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီချက် ဆန္ဒမပါရှိဘဲ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အတင်းအကျပ် ဘာသာကူးပြောင်းစေခြင်း၊ ဖိအားပေးခြင်း၊ အနိုင်အထက် ပြုခြင်းများ မပြုလုပ်ရကြောင်း ကတိဝန်ခံချက် အသီးသီး တင်ပြရမည် ဖြစ်ကြောင်း စသည့် အချက်များကို ထည့်သွင်းသင့်ကြောင်း အကြံပြု ခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင် လက်ထပ်ပြီးနောက် ဘာသာ ကူးပြောင်းလိုသည့်ဆန္ဒ ပေါ်ပေါက်လာပါက သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မှတ်ပုံတင် အရာရှိထံသို့ ကူးပြောင်းလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်အား အတိအလင်း ဖော်ပြလျက် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ထပ်ပြီးနောက် ဘာသာကူးပြောင်းလိုကြောင်း တင်ပြလာပါက မှတ်ပုံတင် အရာရှိနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ ယောက်ျားနှင့် မိန်းမ နှစ်ဦးစလုံးအား ခေါ်ယူစစ်မေး ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကူးပြောင်းလိုသည့် ဘာသာအယူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာစွာ နားလည်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်မေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကူးပြောင်းလိုသည့် ဘာသာအပေါ် အမှန်တကယ် ယုံကြည်သက်ဝင်၍ ပြောင်းလဲလိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်ပေါက်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းမှ ဘာသာကူးပြောင်းရန် ခွင့်ပြုရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စသည့်အချက်များကို မျိုးစောင့်ဥပဒေ ထုတ်ပြန်လိုလျှင် လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ၁၉၅၄ ဥပဒေတွင် ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်လိုလျှင် သော်လည်းကောင်း ထည့်သွင်းသင့်သည့် အချက်များအဖြစ် ဥပဒေပညာရှင်များက ထပ်မံအကြံပြု ခဲ့ကြသည်။
အလားတူ တည်ဆဲဥပဒေများကို ကြည့်ပါက ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ-၂၉၅ မှ ၂၉၈ ထိပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ပြစ်ဒဏ်များ ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်ကာ အများဆုံး ထောင်ဒဏ်မှာ နှစ်နှစ်ထိ ပါရှိကြောင်း၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ- ၄၉၃ မှ ၄၉၈ ထိပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေများက အချုပ်အချယ်မရှိ လွတ်လပ်စွာ ပေးထားသော်လည်း ဘာသာခြားများ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းများမှာ တင်းကျပ်သည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဓမ္မသတ်များက သော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ဓလေ့ ထုံးတမ်းများက သော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာခြားများနှင့် ထိမ်းမြားမှုကို တားမြစ်မထားကြောင်း ထို့ကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အမျိုးသမီးများသည် ဘာသာခြား ယောက်ျားများနှင့် ထိမ်းမြားရသောအခါ တရားဝင် မယားဖြစ်မြောက်ရန် မိမိတို့၏ ကိုးကွယ်ရင်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်လွှတ်၍ ဘာသာခြား၏ ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းရပြီး သားသမီးများမှာလည်း ဖခင်၏ ဘာသာဝင်သူများ ဖြစ်ကြရကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေ စာပေများအရ သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ဘာသာခြားများနှင့် ထိမ်းမြားကြရသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးများနှင့် ၎င်းတို့၏ သားသမီးတို့၏ နစ်နာမှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အက်ဥပဒေ အမှတ် ၂၄ အရ ''ဗုဒ္ဓဘာသာမိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှု ဥပဒေ'' ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ထိုအက်ဥပဒေမှာ ၁၉၄၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁ ရက်မှစ၍ စတင်အတည် ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြောင့် လူသိနည်းပြီး အကျိုးမရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ယင်းအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းပြီး ''၁၉၅၄ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှု အက်ဥပဒေ'' ကို ပြဋ္ဌာန်း အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။မျိုးစောင့်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းခြင်းနှင့် တည်ဆဲ ၁၉၅၄ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှု အက်ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်ပြီး အယူဝါဒ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားလျက်ရှိရာ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းမည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များမှ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းသင့်ကြောင်း ဥပဒေ ပညာရှင်များက သုံးသပ်ခဲ့သည်။
''အခုဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေထဲမှာ ဘာသာပြောင်းကိစ္စ၊ လက်ထက်တဲ့ ကိစ္စတွေအပေါ် သံသယ ဖြစ်တာတွေလည်း ပါနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိ နှစ်ဖက်ကြားက ပဋိပက္ခတွေ ပြေငြိမ်းဖို့ ဒီလိုဥပဒေမျိုးကို ပြဋ္ဌာန်းဖို့ လိုတယ်ဆိုရင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းကြပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ မျိုးစောင့်ဥပဒေက ပြဿနာ ပြေလည်စေရေးကို ဦးတည်တယ်ဆိုရင် ကောင်းပါတယ်'' ဟု သီတဂူ ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာမြတ်သူ (ဘဏ္ဍာရေးမှူး၊ သီတဂူသာသနာပြုအဖွဲ့။MD, အာရှတော် ၀င်) က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Posted by drmyochit Monday, July 29, 2013, under ဓါတ်ပုံများ | No comments
Posted by drmyochit Monday, July 29, 2013, under သတင်းများ | No comments
ပါဂျောင်တွင် အစိုးရ ထောက်လှမ်းရေး သူလျှိုဟု စွပ်စွဲခံရပြီး ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခံခဲ့ရသော ကျောင်းသားလူငယ် အချို့
ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ပါဂျောင်စခန်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူမဆန်သော လူသတ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့သူ ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရဆဲ ABSDF (မြောက်ပိုင်း) စစ်ရေးတာဝန်ခံနှင့် RCSS/SSA တပ်မဟာ ၂၄၁ ၏ တပ်မှူးဦးသံချောင်း (ခေါ်) မြင့်စိုး (ခေါ်) စ၀်ခွန်ကျော်ကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းအပေါ် အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၂၃ ရက်က လွတ်မြောက်လာခဲ့သည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၇၃ ဦးတွင် ဦးသံချောင်း အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် ၂၉ ဦး ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဦးသံချောင်းမှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်း မရှိသေးသဖြင့် ဦးသံချောင်းကို မည်သို့သဘောထားသနည်းဆိုသော မေးခွန်းကို မေးမြန်းရာ၌ ထိုကဲ့သို့ အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
"ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မြင်တာကတော့ သူကရာဇ၀တ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ မြောက်ပိုင်းမှာ အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသား လူငယ် ၃၈ ယောက်ကို သတ်တဲ့အထဲမှာ သူလည်းပါတာပဲ။ ကိုယ်ကတော့ သူ့ကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တစ်ဦးလို့ မမြင်ဘူး။ ရာဇ၀တ်သား တစ်ဦးလို့ပဲ မြင်တယ်။ ခံခဲ့ရတဲ့ ကာယကံရှင်တွေကတော့ သူ့ကို တရား စွဲမှာပဲ။ အခုလည်း စွဲနေကြတယ်။ တရားစွဲတဲ့အခါ အချို့နေရာတွေမှာ အမှုသက်သေ မခိုင် လုံ လို့ဆိုပြီး ပယ်ချတာ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တို့နိုင်ငံတော် သမ္မတအထိ တင်နေတယ်။ ကိုသံချောင်း ကိုလည်း ဦးစိန် အသတ်ခံရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး CID က ၀င်စစ်ထားတာ ရှိတယ်" ဟု ABSDF (မြောက်ပိုင်း)တွင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခံခဲ့ရပြီး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သူ ဦးသိန်းထွန်းက ပြောကြားသည်။
ဦးသံချောင်းသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ပါဂျောင်ဒေသ၊ လိုင်စင်စခန်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု၌ အဓိက တာဝန်ရှိသူများထဲတွင် တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်ကြောင်း ABSDF (မြောက်ပိုင်း)မှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သူများက ပြောကြားပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ပါဂျောင်ဒေသ၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုတွင် ကျူးလွန်သူများအား အရေးယူခြင်း မရှိသေးသည့်အပြင် နစ်နာသူများ၏ တိုင်ကြားချက်များကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ကျောင်းသားလူငယ်များကို ထောက်လှမ်းရေး သူလျှိုဟု စွပ်စွဲကာ လူမဆန်သော ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများနှင့် ဓားဖြင့် ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသူ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်အချိန်က ဦးသံချောင်းနှင့် ၎င်းအဖွဲ့ဝင်အချို့၏ လူမဆန်သော သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူ ၃၉ ဦးရှိခဲ့ . . .
"သူတို့ ကျူးလွန်ခဲ့တာက အရမ်းဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးလေ။ ဒါကြောင့် သံချောင်းကို နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက်လို့ ကျွန်မတော့ မသတ်မှတ်ဘူး။ အဲဒီလို သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့ အခြားနိုင်ငံရေး သမားတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပါ လျော့သွားမှာပေါ့နော်။ ဒီလို အပြစ်ကြီး ကျူးလွန်ခဲ့တာကိုက လူ့အခွင့်အရေးဘက်ကပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေးဘက်ကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခွင့်လွှတ်လို့ မရနိုင်တဲ့ ပြစ်မှုကြီးပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ က ဖြစ်ခဲ့တာ ဆိုပေမယ့် အခုအချိန်အထိတောင် အစ်မတို့ ခံစားနေရတုန်းပဲ။ အစ်မတို့ အဖေတွေ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အချိန်တုန်းက တရားမျှတမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ အစ်မတို့ကတော့ သူတို့ကို တရားဥပဒေအတိုင်းပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ သူဟာအပြစ်ရှိရင် ရှိမှန်း လူသိထင်ရှား အားလုံးက လက်ခံစေချင်တယ်။ သူအပြစ်ရှိတဲ့ အကြောင်းကို သူကိုယ်တိုင်လဲ သိရမယ်။ သူအပြစ်လုပ်လို့ လုပ်တာက တခြား၊ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်လို့ နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်တာက တခြားဆိုတာကို အစ်မတော့ လက်မခံဘူး။ အစ်မတို့တွေစုပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတဆီ စာတင်ထားတာ ရှိတယ်။ နှစ်လကျော်နေပြီ။ အခုအချိန်အထိတော့ ဘာမှအကြောင်းပြန်တာ မရှိသေးဘူး" ဟု ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ၌ ထောက်လှမ်းရေး သူလျှိုဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရပြီး စစ်ကြောရေးတွင် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရမှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူ ဦးစိန် (မှိုင်းရာပြည့် ကျောင်းသားဟောင်း၊ ဒီးဒုတ်ဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူ) ၏ သမီး ဒေါ်စန်းစန်းအေးက ပြောကြားသည်။
ထို့အတူ ထောက်လှမ်းရေး သူလျှိုဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရကာ ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ရှိ အာဆံကုန်း (ခေါ်) လူသတ်ကုန်းတွင် လူပုံအလယ်၌ အ၀တ်အစားများချွတ်၍ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသူ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ် (မြန်မာစာ) ကျောင်းသူ မခင်ချိုဦး၏ဖခင် ဦးတင်ပိုက အမှန်တရားကိုသာ လိုလားပြီး တရားဥပဒေအတိုင်း ဖြစ်စေလိုကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
"သမ္မတဆီ စာတင်ထားတာ နှစ်လကျော်နေပြီ။ အခုအချိန်အထိ ဘာမှအကြောင်းမပြန်ဘူး။ မိသားစုတွေ အနေနဲ့ ဖြစ်စေချင်တာကတော့ မှန်မှန်ကန်ကန်ပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒို့သားသမီးတွေကို ထောက်လှမ်းရေးလို့ စွပ်စွဲတယ်။ ဒါကဟုတ်မှ မဟုတ်တာဘဲ။ ကိုယ့်သမီးဘာလဲ ဆိုတာတော့ ကိုယ်သိတာပေါ့။ အဲဒါကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုဖို့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် စောင့်ခဲ့ရတာ။ အခုအချိန်အထိ အမှန်တရားက မပေါ်ခဲ့သေးဘူး။ ဒို့တွေကတော့ အမှန်တရားအတိုင်း ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဥပဒေအတိုင်းလဲ အရေးယူ စေချင်တယ်။ သူ့မှာရှိတဲ့ အပြစ်အတိုင်းကိုလည်း လူတွေက အသိအမှတ်ပြုဖို့ လိုတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်တာက သံချောင်း တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး။ နောက်ထပ်လေးငါးယောက် ကျန်သေးတယ်။ တရားခံတွေ အကုန်လုံး တရားဥပဒေအတိုင်း ဖြစ်စေချင်တာက မိသားစုတွေရဲ့ ဆန္ဒပဲ" ဟု ဦးတင်ပိုက ပြောကြားသည်။
အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရ သူများထဲတွင် တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟုပင် စွပ်စွဲခံရကာ အာဆံကုန်း (ခေါ်) လူသတ်ကုန်းတွင် လူအများရှေ့၌ ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံခဲ့ရသည့် မန္တလေးမှ ကိုချိုကြီး၏အစ်မ ဒေါ်သင်းသင်းဝင်းကလည်း ဦးသံချောင်းကို ရာဇ၀တ်သား၊ လူရမ်းကား အနေဖြင့်သာ သတ်မှတ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
"အစ်မ နားလည်ထားတာက အဲဒီဖြစ်စဉ်မှာ သံချောင်းတို့ကတော့ ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ သူတွေဖြစ်လို့ တရားခံမှာဆိုရင် နံပါတ်တစ်ပေါ့နော်။ နောက်ထပ်ကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်တာ မဟုတ်ပေမယ့် ကျူးလွန်သူတွေကို အားပေးအားမြှောက် လုပ်ခဲ့တဲ့ လူတွေက နံပါတ်နှစ်ပေါ့။ နောက်ဒီဖြစ်စဉ် ဖြစ်လာဖို့ လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ သတ်မှတ်ပါစေ အစ်မတို့ကတော့ သံချောင်းကို ရာဇ၀တ်သား၊ လူရမ်းကားလို့ပဲ မှတ်ယူပါတယ်။ သူက ခွေးရူးလိုပဲ မည်းမည်းမြင်ရာ ကိုက်တတ်တဲ့သူဖြစ်လို့ သူ့ကိုတော့ တရားဥပဒေအရ အရေးယူဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မြင်တယ်" ဟု ဒေါ်သင်းသင်းဝင်းက ပြောကြားသည်။
ဦးသံချောင်းသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် တောခိုခဲ့ပြီး ABSDF (မြောက်ပိုင်း) သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကာ စစ်ရေးတာဝန်ခံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်နေစဉ် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ကာလအတွင်း ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ပါဂျောင်၊ လိုင်စင်စခန်း၌ ကျောင်းသားလူငယ်များကို ထောက်လှမ်းရေး သူလျှိုဟု စွပ်စွဲကာ လူမဆန်သော ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများနှင့် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် သတ်ဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသူ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်အချိန်က ဦးသံချောင်းနှင့် ၎င်းအဖွဲ့ဝင် အချို့၏ လူမဆန်သော သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူ ၃၉ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း မြောက်ပိုင်းပြန် ကျောင်းသားများက ပြောကြားသည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် KIO က အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ရယူခဲ့ပြီးနောက် ကချင်ဒေသ၌ လှုပ်ရှားနေသော ABSDF (မြောက်ပိုင်း) စစ်ရေးတာဝန်ခံ ဦးသံချောင်းနှင့်အဖွဲ့မှာ ပါဂျောင်ဒေသကို စွန့်ခွာခဲ့ပြီး SSPP/SSA အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် SSPP/SSA နှင့် လမ်းခွဲလိုက်ပြီး RCSS/SSA နှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်းကာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ပန်မိုင်ဆုန်တိုက်ပွဲနှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ် လွယ်တိုင်းလျန် တိုက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး RCSS/SSA တပ်မဟာ ၂၄၁ ၏ တပ်မှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်တွင် နမ့်ခမ်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ နမ့်တီးရွာတွင် အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးနောက် မတ်လတွင် စွဲချက် ၁၁ ချက်ဖြင့် သေဒဏ်ချမှတ် ခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်က လားရှိုးမြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော အစိုးရ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ABSDF (မြောက်ပိုင်း) စစ်ရေးတာဝန်ခံ ဦးသံချောင်းကို ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှု သမိုင်းတွင် လူသတ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့သူ ရာဇ၀တ်ကောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ပါဂျောင် လူသတ်မှုတွင် အသတ်ခံခဲ့ရသူများ စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဦးသံချောင်းကို လူသတ်မှု၊ ရာဇ၀တ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အကြမ်းဖက်မှုများ အပါအ၀င် နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုများဖြင့် အရေးယူခဲ့သော်လည်း မြောက်ပိုင်းတွင် ကျူးလွန်ခဲ့သော အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုများအတွက် မည်ကဲ့သို့ အရေးယူခဲ့သည် ဆိုခြင်းကိုမူ ရှင်းလင်းစွာ မထုတ်ပြန်ခဲ့သဖြင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်တွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ စိစစ်ရာ၌ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများက ဦးသံချောင်းကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သံချောင်းကတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း အမိန့်ပေးပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း ရက်ရက်စက်စက် လူသတ်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ သူ့ကြောင့် ၈၈၈၈ မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းခဲ့ရသလို ABSDF လည်း ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းခဲ့ရတယ်။ သူ့ကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားလို့ သတ်မှတ်ပြီး သူ့ကိုပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုရင် . . . .
"RCSS/SSA က တင်လာတဲ့ စာရင်းထဲမှာ သူပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တင်လာတဲ့ စာရင်းကို ထောက်ခံပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး တင်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ၏ အတွင်းရေးမှူးနှင့် လက်ကျန်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လေ့လာစိစစ်ရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုင်းညွန့်လွင်က ပြောကြားသည်။
"သူ့ကို ပုဒ်မ ၁၇/၁ နဲ့ ထောင်ချတယ်လို့ပဲ ယူဆပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားလို့ပဲ သတ်မှတ်ပါတယ်" ဟု RCSS/SSA ၏ ကျိုင်းတုံမြို့ ဆက်ဆံရေး ရုံးတာဝန်ခံ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းစိုးမိန်းက ပြောကြားခဲ့ပြီး သီးခြားမှတ်ချက် ပေးရန်ကိုမူ ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
"နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့တွေ အနေနဲ့ သူ့ကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ သူအခြားမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စ အခြားပြဿနာပါ။ သူထောင်ကျရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းက နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်လို့ သူ့ကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ သူကျခံထားရတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကတော့ တစ်ကျွန်းနဲ့ အခြားပြစ်မှုတွေရောပေါ့။ ထောင်ထဲမှာ သံချောင်းတစ်ယောက်တည်း ကျန်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ စာရင်းအရကို ၁၀၄ ယောက် ကျန်နေသေးတော့ အဲဒီလူတွေ အကုန်လုံးကို ဆက်လွှတ်ပေးဖို့တော့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သံချောင်းကို မြောက်ပိုင်း ABSDF ကိစ္စကြောင့် မလွှတ်တာလို့ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဆိုလို့ သူတစ်ယောက်တည်း ကျန်နေတာ ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ လွှတ်ပေးဖို့ စာရင်းတင်ထားတဲ့ အထဲမှာ သူ့နာမည်လဲ ပါပါတယ်" ဟု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့မှ ကိုမြင့်အောင်က အဖွဲ့၏ သဘောထား အနေဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
"ကိုသံချောင်းကို AAPP အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ ကိုသံချောင်း မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေက ABSDF အနေနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တာ။ အခု အဖမ်းခံရတာက SSA အနေနဲ့ အဖမ်းခံရတာ။ လူတစ်ကိုယ်တည်း နှစ်ဘ၀ ဖြစ်နေတာပေါ့။ ABSDF အနေနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဥစ္စာကိုတော့ သူ့ဘာသာ ရဲဘော်တွေနဲ့ ရှင်းပေါ့နော်။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့နဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရှင်းပေးလို့လဲ မရဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရကိုလည်း အခုလိုပဲ ပြောပြထားပါတယ်" ဟု AAPP မှ ကိုဘိုကြည်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် NLD ပါတီ၏ အမှုဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုကျော်ထွေးက "နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့လူ အားလုံးကိုတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် လက်ခံတယ်။ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်တာတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေကိုတော့ ခွင့်လွှတ်လို့မရဘူး။ အဲဒါတွေ အတွက်တော့ အပြစ်ပေး အရေးယူခံရမှာပဲ၊ ဒါတွေကို ရောနှောလိုက်လို့ မရဘူး" ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၉ တွင် ABSDF (မြောက်ပိုင်း)ရှိ ပါဂျောင်စခန်းတွင် ကျောင်းသားလူငယ်များကို သူလျှိုဟုဆိုကာ စတင်သတ်ဖြတ်မှုများ ရှိနေခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် မြင်းခြံမြို့မှ ကိုမြတ်ကိုကိုအား ထောက်လှမ်းရေးဟု စွပ်စွဲကာ သတ်ဖြတ်မှုကို စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထိုသတ်ဖြတ်မှုကို ဦးသံချောင်းမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် မိုးကောင်းမြို့မှ ကိုလွှမ်းအား အဖွဲ့အစည်း ပြိုကွဲအောင် လုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲပြီး စခန်းအလယ် သင်တန်းကွင်းတွင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့ပြီး ကျန်ရှိသော အလောင်းကို ထိုနေရာ၌ပင် ကျင်းတူးမြှုပ်နှံပြီး ဘော်လီဘောကွင်း ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း၊ ရန်ကုန်မှ ကိုအောင်ကျော်ကို ထောက်လှမ်းရေးဟု စွပ်စွဲကာ ဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းခဲ့ပြီး ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေစဉ် သေဆုံးခဲ့ရခြင်း၊ ၁၉၉၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ (ပြည်ထောင်စုနေ့) တွင် ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ၏ ပထမဆုံး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (အထက်ဗမာပြည်) ဥက္ကဋ္ဌ မန္တလေးမှ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါအ၀င် ကျောင်းသား ၁၅ ဦးကို အစိုးရ ထောက်လှမ်းရေးဟူသော စွပ်စွဲချက်များဖြင့် အာဆံကုန်း (ခေါ်) လူသတ်ကုန်းတွင် လူအများရှေ့၌ သွေးအေးအေးဖြင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကာ ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် သတ်ခဲ့ခြင်းများ၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်းမှာပင် ကိုကျော်ဝေ၊ ကိုစိုးဝင်းသန်း၊ ကိုဝင်းနောင်တို့ကို လူသတ်ကုန်း၌ပင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းများ အစရှိသည့် လူမဆန်သော လုပ်ရပ်များထဲတွင် ဦးသံချောင်းမှာ အဓိက လုပ်ဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။
ABSDF (မြောက်ပိုင်း) စစ်ရေးတာဝန်ခံ ဦးသံချောင်း (ခေါ်) မြင့်စိုး (ခေါ်) စ၀်ခွန်ကျော်၏ လူမဆန်စွာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသူများ
၁။ ကိုကျော်ဝေ (မန္တလေး၊ ၇-၂-၁၉၉၂ တွင် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ)
၂။ ကိုသာဓု (ရန်ကုန်၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရ)
၃။ မခင်ချိုဦး (ဒုတိယနှစ် (မြန်မာစာ)၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (လှိုင်)နယ်မြေ၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် အ၀တ်အစားများချွတ်၍ လူပုံအလယ်၌ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရ)
၄။ ကိုသောင်းမြင့် (တန့်ဆည်ရွာ၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရ)
၅။ ကိုတူးတူး (မြစ်ကြီးနား၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ)
၆။ ကိုထွန်းအောင်ကျော် (မန္တလေး၊ ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ၏ ပထမဆုံးဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (အထက်ဗမာပြည်) ဥက္ကဋ္ဌ၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ)
၇။ ကိုချိုကြီး (မန္တလေး၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ)
၈။ ကိုအေးမြင့် (ကသာ၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ)
၉။ ကိုမောင်မောင် (ကသာ၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ)
၁၀။ ကိုဌေးမြင့်ဝင်း (ရန်ကုန်၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ)
၁၁။ ကိုရန်အောင် (မန္တလေး၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ)
၁၂။ ကိုသက်နိုင် (ရန်ကုန်၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ)
၁၃။ ကိုအောင်ဖိုး ( ရန်ကုန်၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ)
၁၄။ ကိုလှမြင့် (ခေါ်) ကိုဇော်မင်းသွေး (မြို့ကုန်း၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ)
၁၅။ ကိုကျော်ကျော်မင်း (ကန့်ဘလူ၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ)
၁၆။ ကိုမောင်မောင်ကြွယ် (ရန်ကုန်၊ ၁၂-၂-၁၉၉၂ တွင် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ)
၁၇။ ကိုစိုးဝင်းသန်း (မန္တလေး၊ ၁၅-၂-၁၉၉၂ တွင် ဓားဖြင့်ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရ)
၁၈။ ကိုဝင်းနောင် (ရန်ကုန်၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ဓားဖြင့်ခုတ်သတ်ခံရ)
၁၉။ ကိုအောင်ကိုး (ဗန်းမော်၊ အဖမ်းခံထားရစဉ် ၁၉၉၁ ခုနှစ်၌ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရ)
၂၀။ ကိုမြတ်ကိုကို (မြင်းခြံ၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် သတ်ဖြတ်ခံရ)
၂၁။ ကိုလွှမ်းမိုး (မိုးကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းပြိုကွဲအောင် လုပ်သည်ဆိုသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ၁၉၉၀ တွင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရ)
၂၂။ ကိုကျော်ကျော်အုန်း (တန့်ဆည်၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က ဖားကန့်တွင် အသတ်ခံရ)
၂၃။ ကိုရန်ရှင်း (မြင်းခြံ၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ်က ဖားကန့်တွင် အသတ်ခံရ)
၂၄။ ကိုအောင်မြင့်ထွန်း (KIA တပ်ရင်း-၆ နယ်မြေတွင် အသတ်ခံရ)
ABSDF (မြောက်ပိုင်း) စစ်ရေးတာဝန်ခံ ဦးသံချောင်း (ခေါ်) မြင့်စိုး (ခေါ်) စ၀်ခွန်ကျော်၏ လူမဆန်စွာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူများ
၁။ ကိုစိုးမင်းအောင် (မန္တလေး၊ စစ်ကြောရေး ဒဏ်ရာကြောင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် သေဆုံး)
၂။ ကိုတင့်လွင်(မြစ်ကြီးနား၊ စစ်ကြောရေး ဒဏ်ရာကြောင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် သေဆုံး)
၃။ ဦးစိန်(ရန်ကုန်၊ စစ်ကြောရေးဒဏ်ရာကြောင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အချုပ်ထောင်တွင်း သေဆုံး)
၄။ ကိုကျော်ဌေး (မန္တလေး၊ စစ်ကြောရေး ဒဏ်ရာကြောင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် သေဆုံး)
၅။ ကိုရာကွတ်ဘိုင် (စစ်ကြောရေး ဒဏ်ရာကြောင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် သေဆုံး)
၆။ ကိုခင်မောင်စိုး (ခေါ်) စိုးကြီး (မန္တလေး၊ စစ်ကြောရေး ဒဏ်ရာကြောင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် သေဆုံး)
၇။ ကိုတင်မောင်အေး (ကသာ၊ စစ်ကြောရေး ဒဏ်ရာကြောင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် သေဆုံး)
၈။ ကိုအောင်မင်း (ခေါ်) ထိန်လင်း (မန္တလေး၊ ရိုက်နှက်ခံရမှုကြောင့် အချုပ်ထောင်အတွင်း သေဆုံး)
၉။ ကိုအေးကျော် (မန္တလေး၊ စစ်ကြောရေး ဒဏ်ရာကြောင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် သေဆုံး)
၁၀။ ကိုကျော်ကျော်ဦး (ကသာ၊ စစ်ကြောရေး ဒဏ်ရာကြောင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် သေဆုံး)
၁၁။ ကိုပြည့်စိုးနိုင် (ရန်ကုန်၊ စစ်ကြောရေး ဒဏ်ရာကြောင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် သေဆုံး )
၁၂။ ကိုဇော်ဝင်းချစ် (ဗန်းမော်၊ စစ်ကြောရေး ဒဏ်ရာကြောင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် သေဆုံး)
၁၃။ ကိုဝင်းသိန်း (ခေါ်) အရှည်ကြီး (၀န်းသို၊ အချုပ်ထောင်အတွင်း သေဆုံး)
၁၄။ ကိုအောင်ကျော် (ရန်ကုန်၊ စစ်ကြောဒဏ်ရာများဖြင့် ၁၉၉၀ တွင် သေဆုံး)
၁၅။ ကိုဝင်းနောင် (ရန်ကုန်၊ စစ်ကြောဒဏ်ရာများဖြင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် သေဆုံး)
၁၆။ ကိုတင်မောင်အေး (ကသာ၊ စစ်ကြောဒဏ်ရာများဖြင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် သေဆုံး)
အများကြီး မတွေးတော့ အရာရာကို ဥပေက္ခာ ပြုနိုင်တယ်ဆို...
ရည်းစားဟောင်းက မျက်လုံးထိုးဖောက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူသည် ...
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်အား ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း လိင်ကျွန်အ...
ညစ်ညမ်း ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ပရိုဂျက်တာနှင့် ပြသသည့် သတ...
လက်ရှိထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် မျိုးစောင့်...